Warbixin Ku Saabsan Idaacada IQRA FM - Nairobi Kenya:-
Warbixintii Asad Cadaani
Janaayo 10, 2002
Saacadu markay tahay 2:00 duhurnnimo ee geeska afrika waxaa xaafada Islii ee Nairobi Kenya dhagahaaga ku soo dhacaaya Idaacad Af-Soomaali ku hadlaysa ,Idaacadaas oo dhamaan dad weynaha Soomaaliyeed ee Nairobi ku nool oo lagu qiyaaso tobanaan kun si joogta ah oo xiisaleh u dhagaystaan ,isla markaana ay ka helaan wararka dalka iyo dibadaba gaar ahaan kuma Soomaaliya khuseeya oo ay idaacadu xoogga saarto .
Ridwaan Xaaji C/wali, Weriye kamida idaacada IQRA FM
Laanta AF-Soomaaligu waxay maalin walba hawada ku jirtaa hal saac 2:00 ilaa 3:00 ,taas oo u suurta gelisay Soomaalida Nairobi ku dhaqan inay wararka aduunka si baaxad weyn u la socdaan , xilligaa aynu soo xusnay saacadu markay gaadho Xaafada Islii waxay in�dhahaagu qabanayaan dad tukaamada hortooda iyo meelkasta oo idaacadi ka baxayso ku xoonsan ,xataa taxi-siilayaasha ayaad arkaysaa oo ay u wada saaran tahay.
Idaacada IQRA waxay tartan kula jirtaa Laanta AF-Soomaaliga ee BBCda ,gaar ahaan wararka aduunka iyo kuwa Soomaalida oo marka shir lagu qabto Nairobi ama meel kale oo aduunka ka mid ah isla markaana khuseeya Soomaalida,IQRA si deg dega ayey u soo gaadhsiisaa Soomaalida ku dhaqan Nairobi wararkaas, intaas waxaa u sii dheer waraysiyo dhaadheer oo ay siyaasiyiinta Soomaalida la yeeshaan oo aanay Idaacada BBCdu awood u lahayn waqtigoo ku yar awgii inay sii dayso ayey IQRA siidaysaa.
Idaacadan waxaa ka shaqeeya wariyaaal Soomaaliya caanka ahaa oo raadyow muqdisho ka soo shaqeeyey xilligii dawladii hore ee Soomaaliya sida Max�med Aadan Xirsi (TEERA), Yaasiin Ciise Wardheere, C/qaadir Max�med Mursal iyo Khadiija Mayoow Abuukar , waxaa kaloo iyaguna ka shaqeeya Ridwaan Xaaji C/wali iyo Axmed-Yaasiin Max�med Sooyaan .
Waxaa Idaacada IQRA FM la furay markii ugu horaysay 27 july ee sanadkii 2000. sababta loo furay waxay ahayd in la helo Idaacad ka duwan Idaacadaha kale ee dalkan, taas oo xooga saarta barnaamijyada diinta Islaamka, wararka caalamka oo tafaasiil ah iyo barnaamijyo marba lagaga doodo waaqica taagan.
Daarta Xarunta u ah Idaacada IQRA FM, Nairobi, Kenya
waxay Idaacadu wararka iyo barnaamijyada ku tebisaaluqadaha:-1-Ingiliish 2-Kiswahili 3-Soomaali 4-Urduu. Shaqaalaha guud ahaan ka sheqeeya Idaacada waxay tiradoodu tahay 30 qof oo isugu jira wariyayaal, farsama yaqaano iyo caawiyayaal.
Waxaa agaasime guud ka ah Idaacada Sh. Axmed Khaliif Maxamed oo horay u ahaa waziir kuxigeenka wazaarada warfaafinta kenya isla markaana ah xoghayaha guud ee ururka muslimiinta ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano (SUPKEM), waxaana ku xigeen u ah Cali Aadan Maxamed.
Laanta Afka Soomaaliga waxaa markii uugu horaysay si rasmi ah loo nidaamiyay oo loo furay 18 sept sanadkii 2000, waxaana ka sheqeeya 6 wariyayaal oo kala ah:
Maxamed Aadan Xirsi Terra oo haatan ah madaxa Laanta Af-Soomaaliga
Cabdi Qaadir Maxamed Mursal
Axmed Yaasiin Maxamed Sooyaan
Khadiijo Mayoow Abuukar.
Agaasiimaha idaacada IQRA FM, Shiikh Axmed Khaliif
Barnaamijyada laanta AF-Soomaaliga ka baxaa waxay ka kooban yihiin.
warka maalin walba 15 daqiiqo
barnaamijyo gaar ah oo inta badan lagu waraysto siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo wariyayaasha.
todobaadka iyo caalamka islaamka
afrika iyo todobaadka
waxyaabaha ay qoraan wargaysyada caalamka iyo kuwagudaha
faaqidaada todobaadka iyo aduunka
isniinta iyo isboortiga
barnaamij diini ah oo layiraahdo(mawduuca jimcaha)
casharka tafsiirka quraanka oo maalin walba baxa.
Asad Cadaani Ibraahim (Isxabaal)